Drones na ọgụgụ isi iji nyere anyị aka ịlụ ọgụ na mkpochapụ nke ụmụ anụmanụ | Akụrụngwa n'efu
Drones na ọgụgụ isi iji nyere anyị aka ịlụ ọgụ nke mkpochapụ nke ụmụ anụmanụ
Obere obere a na-egosi na iji teknụzụ ọhụụ na mpaghara dị iche iche nke ndụ nwere ike inyere anyị aka idozi nsogbu ndị dị mkpa na ọsọ dị ịtụnanya. Anyị nwere ihe atụ na otu ndị nyocha, raara onwe ha nye ichekwa ndụ nke ụdị anụmanụ dị iche iche n'ihe egwu nke ikpochapụ, egosila na ngwakọta nke drones na ọgụgụ isi nwere ike izu ezu iji mee ka ọrụ gị dị ngwa ngwa ma, karịa ihe niile, adịghị agwụ ike.
Dị ka ị nwere ike ịgụ na edemede nke ebipụtara na akwụkwọ akụkọ Bitanic Ecological Society 'Metzọ nke usoro ihe ọmụmụ na ndụ'', Otu ndi nyocha nke Australia kpebiri na iguta oke ohia kwesiri ime ka uzo di nma karie ka o kwere mee. Mgbe ọtụtụ ule mechara, ha jisiri ike mepụta usoro nwere ike ịgụta ụdị anụmanụ dị iche iche, gụnyere ọtụtụ ụdị nnụnụ, na-eme usoro ha ziri ezi karịa jiri ya tụnyere usoro ejirila ruo ugbu a n'ụzọ ọdịnala.
Otu ìgwè ndị na-eme nchọpụta n'Australia amalitela iji ngwakọta nke drones na ọgụgụ isi artificial gụọ ọchịchị nke nnụnụ ndị nọ n'ihe ize ndụ.
Dị ka egosiri Jarrod Hodgson, onye ndu akwukwo nke akwukwo nyocha na umu akwukwo PhD na ngalaba nke ihe omumu na Mahadum Adelaide:
Ebe ọ bụ na ọtụtụ anụmanụ n'ụwa niile na-achọ ikpochapu, mkpa anyị nwere maka data anụ ọhịa ziri ezi adịtụbeghị karịa. Nyocha ziri ezi nwere ike ịchọpụta obere mgbanwe na ọnụọgụ ụmụ anụmanụ. Nke ahụ dị mkpa n'ihi na ọ bụrụ na anyị echere maka nnukwu mgbanwe na ọnụọgụ ndị ahụ iji hụ ọdịda ahụ, ọ nwere ike ịbụ oge iji chekwaa ụdị egwu.
N'ime oke ohia, onu ogugu ndi mmadu amaghi. Nke a na - eme ka o sie ike ịnwale izi ezi nke ịgụta ọnụ. Anyị kwesịrị ịnwale teknụzụ ebe anyị maara azịza ziri ezi.
Nsonaazụ ga-enyere aka nụchaa ma melite usoro nlekota oru drone ka drones nwee obere ma ọ bụ enweghị mmetụta na anụ ọhịa. Nke a dị mkpa karịsịa maka ụdị ndị na-enwekarị ọgba aghara na ebe usoro ọdịnala metụtara ịdị nso na ụdị agaghị ekwe omume ma ọ bụ na-achọsi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » drones » Drones na ọgụgụ isi iji nyere anyị aka ịlụ ọgụ nke mkpochapụ nke ụmụ anụmanụ
Alaka Alaka bụ ụlọ ọrụ n’azụ ibipụta ọmarịcha ụlọ a
Stratasys, Dassault Systèmes na Easton Lachappelle sonyeere ndị agha n'ike iji zụlite prosthes